Sheeko yaab leh: Nin Soomaali ah oo kellidiisa laga soo saaray 700 oo dhagax ah | GURIGA HAWEENKA
Home » Heath » Sheeko yaab leh: Nin Soomaali ah oo kellidiisa laga soo saaray 700 oo dhagax ah
Dhaqaatiirta mid kamid ah isbitaalada India ayaa la yaabeen mawaadin Somaliyed kadib markii mid kamid ah Keliyihiisa ay kasoo saareen boqolaal dhagax.
Dhaqaatiirta ayaa sheegay in ninkaan uu hayay cudur inta badan aanan la arkin oo sababay in kellidiisa ay soo saarto dhagaxda faraha badan.
Bukaanka oo lagu magacaabo Abdi Rahman kana yimid magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa muddo 3 sano ah hayay dhabar xanuun isagoona booqday dhaqkhtar ka howgala magaalada Gaalkacyo, kadibna Komputer la saaray ayaa waxaa loo sheegay in dhagax yar yar iyo kuwo waaweyn ay labada kelliyood uga jiraan.
Khalliin furan oo lagu sameeyay kellidiisa bidix 8 bilood ka hor ayaa looga soo saaray 3 dhagax oo waaweyn.
Si kastaba, khalliinkii lagu sameeyay ayaa ku reebay jeermis kana hor istaagay in khalliin looga sameeyo kellida midig.
“Waa markaas markii uu inoo yimid. kellidiisa bidix jeermis ayay qaaday khalliina laguma sameyn karin waxaan ku dajinay daawooyin kahor inta aanan khalliinka endoscopic loo yaqaan uga sameyn kellida midig” ayuu yiri V. Surya Prakash oo ka mid ah dhakaatiirta isbitaalka Virinchi, oo ah isbitaalka khalliinka lagula fuliyay Abdi Rahman sadex maalin ka hor
Dhaqaatiirta ayaa kellida midig ee Abdi Rahman ka saaray dhagax weyn kadib hadana isla kellida kasoo saaray boqolaal dhagax oo yar yar.
“Qaar kamid ah dhagaxaanta ayaa dhulka ku dhacay intii lagasoo saarayay, waxaan ku qiyaasnay inkabadan 700 oo dhagaxaan yar yar ah inta ugu badan ee aan arki jiray waxay ahaayeen 100 ilaa 150” ayuu yiri Dr. Prakash xilli uu soo bandhigayay dhagaxaan farabadan oo ku jiray baakad u eg sanduuq.
Isbitaalka ayaa iminka baaritaan ku sameeyndoona dhagaxaanta iyo waxa ay ka sameysanyihii iyo sida ay u haleeleen Abdi Rahman inkastoo dhakaatiirtu ay aaminsanyihiin inay noqon karto hido balse Abdi Rahman ayaa sheegay in qof kamid ah qoyskiisa uusan waligiis ku dhicin.
Previous: Waxyaabaha minka lagu xiro (looyaqaano aneelo)
Next: SAWIRRO-HINDIYA: Daad ku dhuftay gobolka Gujarat oo 120 qof ay ku dhinteen